Rị elu Na Cyberattacks Na-abawanye Nkà Mmụta Nchebe IT na Nigeria - Sophos Survey
Mbuli elu nke Cyberattacks mụbara Nkà Mmụta Nchebe IT na Nigeria - Sophos Survey
Naijiria Twitter mmachibido iwu na ịchụso ọbụbụeze Internetntanetị
Oge mbu ndi Ghana choputara ibuputa E-commerce n’uwa niile
Egwuregwu WA-TTS Pitch Asọmpi mepere maka mmalite mmalite nke Africa ($ 5,000)
Central Bank of Nigeria na-ewepụta ego dijitalụ na njedebe nke 2021
Onye ọchụnta ego Ghana? Tinye maka ngwa ahịa ego nke azụmahịa nke Digital Commerce Accelerator
Tinye! Ihe ndi di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche ($ 15,000)
SystemSpecs na-akwụghachi Onyinye Childrenmụaka aka na Nchebe Mba
Webrock Ventures na Healthforce weputara New Digital Primary Care Platform maka Africa
Plentywaka ndị mmekọ GUO Transportgbọ njem iji gbasaa onyinye njem ụgbọ ala
CFA ikwu okwu na Onye guzobere Institute Global Event
Societylọ ọrụ collaborationntanetị mara ọkwa mmekorita iji kwalite Digital Economy na Etiopia
60% nke ndị otu IT na Naịjirịa kwuru na ọnụọgụ cyberattacks ezubere iche maka nzukọ ha mụbara n'oge 2020. Cyberattacks dị ka Ransomware n'oge COVID-19 kwalitere Nkuzi Nkuzi na 87% nke Ndị Otu IT na Nigeria.
Sophos, onye ndu ụwa zuru ụwa ọnụ na ntanetị na-esote ọgbọ taa, kwupụtara ihe nchoputa nke nyocha ụwa ya,
"Ndị ọrụ nchekwa IT: 2021 na Na Na Na Na," nke na-egosi ka ịbawanye ihe ịma aka nchekwa n'oge ọrịa a nyere ndị otu IT ohere pụrụ iche iji wulite ọkachamara cybersecurity ha.
Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị otu IT na Nigeria nke chere ihu ịrị elu na cyberattacks (87%) na ọrụ nchekwa nchebe dị ukwuu (91%) n'ime afọ 2020 wusiri ike nkà na ihe ọmụma ha.
N'agbanyeghị nsogbu ndị ọrịa a na-ebute, 52% nke ndị otu IT nyochara n'ụwa niile, kwuru na mmụọ ndị otu bara ụba n'oge 2020.
Mmụba nke cyberattacks n'oge ọrịa a metụtara ikike nchekwa IT n'akụkụ ngalaba ụlọ ọrụ niile ekpuchiri na nyocha ahụ, gụnyere, na ọkwa ụwa, agụmakwụkwọ (83%), ụlọ ahịa (85%) na ahụike (80%).
Nnyocha ahụ jụrụ 5,400 ndị na-eme mkpebi IT na ụlọ ọrụ dị iche iche na mba 30 gafee Europe, America, Asia-Pacific na Central Asia, Middle East, na Africa.
"N'ime ụwa, afọ 2020 bụ afọ a na-enwetụbeghị ụdị ya maka ndị otu IT," kwuru, Chester Wisniewski, onye isi nyocha sayensị, Sophos.
“Ndị ọkachamara IT rụrụ ọrụ dị mkpa n'inyere òtù dị iche iche aka ịga n'ihu n'agbanyeghị mgbochi na mmachi ndị COVID-19 chọrọ.
N'ime ihe ndị ọzọ, ha mere ka ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ nwee ike ịkwaga n'ịmụ ihe n'ịntanetị, ndị na-ere ahịa ka ha gbanwee na azụmahịa n'ịntanetị, ụlọ ọrụ ahụike iji nyefee ọrụ dijitalụ na nlekọta n'okpuru ọnọdụ siri ike siri ike, ma hụ na ụlọ ọrụ ọha na eze nwere ike ịga n'ihu na-eweta ọrụ dị mkpa.
“Ihe ka ukwuu n’ime nke a ka a ga-eme na oke ọsọ, yana obere akụrụngwa na akụrụngwa dịnụ ma ka ọ na-eche ihu ịrị elu nke cyberattacks megide netwọkụ, njedebe na ndị ọrụ. Ikwu ihe nwere ike bụrụ nrụgide maka ọtụtụ ndị otu IT bụ nkwupụta okwu.
“Agbanyeghị, nyocha ahụ gosiri na n'ọtụtụ ọnọdụ, nsogbu ndị a emebeghị ọ bụghị naanị ndị nwere nnukwu aka, mana ndị otu IT nwere mkpali karị, dị njikere ịnabata ọdịnihu nwere nnukwu ọchịchọ.
Dika onu ogugu nke otutu mba nwere ike ibido ime atụmatụ maka ndu karia mgbochi oria ojoo, anyi nwere ezigbo ohere iji mejuputa atumatu IT na nche ohuru, jiri ngwa oru ndi kwesiri ekwesi ike ijikwa ndi oru na oru karia ala IT, wuo ndi okacha amara ndi mejuputara ikike na ụlọ na-apụta, ma webata nyiwe nche na ikpokọta akụrụngwa nwere ọgụgụ isi na nka ịchụ nta mmadụ. Enweghị ịlaghachi azụ. Ọdịnihu nwere ike ịbụ ụdị ọhụụ a na-enwetụbeghị ụdị ya n'oge gara aga. ”
Isi nchoputa nke nyocha “The IT Security Team: 2021 and Beyond” nke emere na Naijiria gunyere:
Ochicho nke ndi otu IT riri elu dika teknụzụ ghọrọ isi ihe na-enyere ndị agbasasị na ọgbakọ dijitalụ aka. N'ozuzu ọrụ IT (ewepu nchekwa) mụbara maka 66% nke ndị otu IT, ebe 69% nwetara mmụba na oke ọrụ cybersecurity.
Ndị mmegide ngwa ngwa jiri ohere nke ọrịa a na-ebute: 60% nke ndị otu IT n'ozuzu ha na-akọ na mmụba nke ọnụọgụ cyberattacks na-elekwasị anya na nzukọ ha na 2020.
Ahụmahụ zuru oke nke 2020 nyeere 82% nke ndị otu IT aka iwulite nkà ha na ihe ọmụma cybersecurity ha. O yikarịrị ka ọtụtụ n'ime ndị ọkachamara a ga-abụrịrị na-arụ ọrụ na-amụ ihe, na-enweta dị ka ìgwè dị iche iche na-achọ nkà na ụzụ ọhụrụ na nchebe nchebe, na-enwekarị nrụgide kpụ ọkụ n'ọnụ ma dị anya site na ọrụ ha.
Iguzogide ihe ịma aka ọnụ kwalitere omume otu. Mkpụrụ omume otu IT gbasakwara maka ọtụtụ otu. Ihe kariri ọkara (59%) nke ndị otu IT nyochara kwuru na mmụọ otu na-abawanye na 2020. O yikarịrị ka ọnọdụ ndị ọzọ na nke onwe na-emetụta Morale n'oge ọrịa a, dịka mkpọchi obodo, enweghị ike ịhụ ezinụlọ na ihe ndị ọzọ. Ka o sina dị, nchoputa ahụ na-egosi na ebumnuche ebumnuche, mmetụta nke ịba uru na ịnagide nsogbu na-enyere aka ijikọ ma bulie mmụọ nke ndị otu IT
Ihe omuma nke 2020 emeela ka ochicho buru ibu maka ndi otu IT buru ibu ma jiri ihe di omimi di ka ọgụgụ isi (AI) na atumatu teknụzụ n'ọdịnihu. Ọtụtụ ụlọ ọrụ dị ka ha abanyela na 2021 na atụmatụ iji bulie ma ụlọ IT ma ndị outsour out, na ịnakwere ikike nke ngwaọrụ na teknụzụ dị elu. Nnyocha ahụ chọpụtara na 72% nke ndị otu IT na-atụ anya mmụba nke ndị ọrụ nchekwa ụlọ na 2023, na 51% na-atụ anya na ọnụọgụ ndị ọrụ nchekwa IT ga-eto n'otu oge ahụ. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu (94%) na-atụ anya na AI ga-enyere aka ịnagide ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke mwakpo na 93% na mgbagwoju anya nke mwakpo. Nke a nwere ike ịbụ na akụkụ ụfọdụ nke 47% nke ndị otu IT kwenyere na cyberattacks dịzi elu maka ndị otu ụlọ ime ihe nke aka ha
Nyocha nyocha nke “IT Security Team: 2021 na Beyond” zuru ezu Ebe a.
Otu IT Security Team: 2021 na Beyond nyochaziri Vanson Bourne, onye ọkachamara onwe ya na nyocha ahịa, na Jenụwarị na February 2021.
Nnyocha ahụ gbara ndị 5,400 mkpebi mkpebi IT ajụjụ ọnụ na mba 30, na US, Canada, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Austria, France, Germany, UK, Italy, Netherlands, Belgium, Spain, Sweden, Switzerland, Poland, the Czech Republic, Turkey, Israel, UAE, Saudi Arabia, India, Nigeria, South Africa, Australia, Japan, Singapore, Malaysia, na Philippines. Ndị zaghachirinụ sitere na otu ndị ọrụ nọ n’etiti ndị ọrụ 100 na 5,000.
Gụọ Cybersecurity: Chama Aka Mmadụ na 2020 ịmụta banyere nche odida n'oge afọ gara aga
Mụtakwuo maka Sophos ' Ọrụ Nkwado Ọsọ nke nwere, na-anọpụ iche ma na-enyocha ọgụ 24/7
Ihe anọ dị n'elu maka na-aza ihe nchebe site na nzaghachi ngwa ngwa nke Sophos na ndị otu egwu egwu egwu
Featured Image: Chester Wisniewski, onye isi nyocha sayensị, Sophos